स्पेनमा झण्डै ४० हजार कोरोना संक्रमित, एकै दिनमा ५ सयको मृत्यु ! « Online Tv Nepal
स्पेनमा झण्डै ४० हजार कोरोना संक्रमित, एकै दिनमा ५ सयको मृत्यु !
Published : 24 March, 2020 10:46 pm
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले स्पेनमा झन् भयावह रुप लिदैछ । स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ५१४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।
नमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र राजधानी म्याड्रिड हो । कोरोनाका कारण म्याड्रिडमा मात्र १५३५ जनाले ज्यान गुमाइकेका छन् । त्यो जम्मा मृत्यु हुने संख्याको ५७ प्रतिशत हो । म्याड्रिडमा १२ हजार ३ सय ५२ जनालाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । नेपाली राजदूताबास समेत रहेको म्याड्रिडमा झण्डै ६ सयको संख्यामा नेपालीहरु रहेको अनुमान छ ।